Salaamanews » Warbixin: Ictiraafdoonka Somaliland iyo Isbedelka mooqifka bulshada Caalamka Home
Home » Maqaallo, Warar Warbixin: Ictiraafdoonka Somaliland iyo Isbedelka mooqifka bulshada Caalamka Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 17th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Doodda midnimada Soomaaliya oo sii socota iyada oo wareeg cusub oo wadahadal ah ka furmayo AnkaraIctiraaf doonka Soomaaliland iyo tacadiyada ka dhanka xaquuqda aadanaha (Warbixin)Qaabka ay u shaqeeyaan hey’adaha amni sugidda Soomaaliya oo dhaliil xoog leh loo jeediyayDowladda Qatar oo qaban qaabineyso wada hadal ay dhex dhigto Soomaaliya iyo Somaliland (Warbixin)Muranka ka taagan maamul u sameynta Jubooyinka ayaa keenay in maciin la bido Ethiopia (Xog-muhiim ah)
(Salaamanews)-Somaliland, waa dhul xad wadaag la ah Djibouti iyo Ethiopia, waxaana 1991-kii laga soo billaabo dadkiisu isku dayayeen inay madax bannaani ka helaan Soomaalida inteeda kale, laakiin niyad jabkii ugu xumaa wuxuu ka soo gaaray markii amaanka dhulkaas ay ka werwereen dowladaha ugu sirdoonka weyn caalamka.
Sanadka 2013 markuu dhashay waxaa digniin deg deg ah soo saartay dowladda Britain oo billowday baaq ay u direyso dadkeeda oo ku aadan inaanay u safrin Somaliland, inta joogtana waxaa laga codsaday inay iskaga soo baxaan.
Iyadoo baaqaas uu ooddin ku yahay hogaamiyeyaasha Somaliland, ayaa waxaa digniin tiiba ka sii daran waxaa soo saaray Mareykanka oo sheegay in Somaliland ay halis ku tahay gobolka oo dhan, dadkiisana wuxuu ka codsaday inay iskaga soo baxaan.
Somaliland, oo baaqyadaas ka jawaabeyso ayaa codsi u dirtay Ethiopia, waxaana magaalada Addis-Ababa ku kulmay wafdi ka socday Somaliland, uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Maxamed C/llahi Cumar iyo diblumaasiyiin ka socday dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka.
Madaxweyne Siilaanyo oo safar ku tagay London, waxaa uu la soo kulmay wasiirka arrimaha dibadda Britain William Hague, waxaana lagula taliyay in 10-sano dib ay ugu biirto Soomaaliya inteeda kale.
Arrintaasi waxay wadna qabad ku noqotay wafdigii madaxweyne Siilaanyo, haatanna waxaa la sugayaa in Somaliland, ay Soomaaliya ku biirto ama ay ka soo horjeesato, hadi ay diddo waxaa dhicisoobi doono shirka London ka dhici doona bisha May ee soo soocta.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee maamulka Somaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir oo shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in amniga deegaannada Somaliland uu yahay mid la isku halleyn karo.
Hadalkan ayuu wasiirka uga jawaabayay warkii ka soo baxay dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo ku saabsanaa in ammaanka deegaanada Somaliland aan la isku haleyn karin.
Wuxuu tilmaamay in haddii ay Al-Shabaab gabbaad ka dhigato Somaliland ay Somaliland wax ka qaban doonto, amni xumina wuxuu sheegay inaanay cidna dani ugu jirin.
Guddoomiyaha xisbiga Ucid Feysal Cali Waraabe ayaa dhankiisa sheegay haddii ay Al-Shabaab u suurtoobayso in ay saldhigyo ka sameysato deegaannada Somaliland ay kol hore ka sameysan lahaayeen deegaannadaas.
Tags: maqaallo, warar « Qoraalkii HoreMunaasibad ku saabsan fanka iyo dhaqanka Soomaalida oo Minnesota lagu qabtay (Daawo sawirro)	Qoraalka Xiga »Kenya: Booliska oo ka wer wersan qaraxyo dhici kara waqtiga ololaha doorashada	Halkan Hoose ku Jawaab